4 Tetikady handray soa faran'izay betsaka avy amin'ny Train Journey | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > 4 Tetikady handray soa faran'izay betsaka avy amin'ny Train Journey
(Last Nohavaozina: 06/03/2021)
Raha izany no fotoana voalohany nandeha lamasinina, tsy misy isalasalana izany Ho voalohany ny maro. ny marina, na iza na iza nomena fitsangatsanganana lamasinina vintana dia lasa adala tanteraka tamin'io! Nahoana? Satria izany asa lehibe! Tsy araka ny tsy manana ny maha mitaingina fiaramanidina, aina fiara fitateram-bahoaka Tours, na fiara tsy mataho-dalana loatra, ny fiaran-dalamby lavitra azo antoka, haingana fa mampino mahafatifaty sy ny tantaram-pitiavana. Mety hiady hevitra ny olona iray fa ny fitsangantsanganana amin'ny lamasinina dia tena fifangaroan'ny Virginia Woolf tsy fisainana sy ny fampiharana amin'ny andro ankehitriny. Ah, ianao mahita izany ho anao sahady.
Koa satria ianao efa nahazo ny tapakila vonona - eto no tsara indrindra 4 tetikady handray soa faran'izay betsaka avy amin'ny fiaran-dalamby dia:
Halaviro ny Laptop & Phone
Tsy fahazoan-dalana mankany Te anao tsy nandinika ny solosaina ny diany manontolo, araka ianao ho voa mafy be! fa tsy, Jereo ny manodidina, jereo izay mitranga; mankafy ny varavarankely fomba fijery sy ny toetra mahatalanjona ivelany. Diniho ny olona manodidina anao, ary mieritreritra momba ny zavatra tsy matetika manana ny fotoana hanaovana. Izany no tonga lafatra fahafahana detoxify eny amin'ny fitaovana isan'andro Ka hanohona ny tsara tarehy pitsiny ny Train Journey ho – na aiza na aiza.
Ankafizo ny Novelty ny Train Journey
Tsy afaka miantoka fa ianao manana Ethan Hawke – Julie Delpy Train Journey toe-javatra eo amin'ny voalohany mitaingina fiaran-dalamby (Oh, eo moa, izahay efa nahita ka swooned rehetra ny The Talohan'ny Trilogy, mangingina, Ho manantena isika manana tantaram-pitiavana toy izany koa hanjo antsika.) Hilatsaka ny akoran'ilay ary aoka ny zavatra niainana mitranga. Inona no manan-tsaina maro, nampientanentana be, ary mahafinaritra ny resaka no manana? Ny traikefa sy ny mahazo mifandray amin'ny olona avy amin'ny kolontsaina samy hafa dia fihetseham-po mahafinaritra! Tsy fantatsika mihitsy ny maro tsara tarehy manorina finamanana ianao, firy ny crushes azonao, na olona firy mahatalanjona no hitanao. Raha toa ka tsy saro-kenatra loatra, ho voalohany hamaky ny ranomandry sy ny lahateny ny olona hitanao mahaliana.
Tsy misy mahasakana ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana Train amin'ny anao toerana tena tanàn-dehibe tany Eoropa miaraka amin'ny vondron'olona ianao mankafy. Eny, fantatsika izay tena mieritreritra – Ahoana no multitask amin'ny alalan'ny rehetra ny fanirian'ny, fangatahana, ny olona rehetra tezitra, ary nomanina mialoha toerana – ary izahay somary aminareo amin'izany. fa, izao zavatra izao, – raha handamina tsara sy manana lahateny marina eo anatrehanao Nankao anaty sambo eo amin'ity dia ity, zavatra ho tsara noho azonao sary an-tsaina.
Nandeha nitety vondrona ary amin'ny andro manokana mampihena ny fankamamiantsika ny vidiny be ny fiaran-dalamby tapakila (Eny, raha ny marina dia afaka mahazo fihenam-bidy eo amin'ny tapakila, milaza, Trenitalia raha mandeha amin'ny faran'ny herinandro). Manome anao olona hizara ny zavatra niainany koa izany ary hahita zavatra amin'ny fomba fijerin'ny olon-kafa. Izany, ary – mamo ao amin'ny firenena eropeana vahiny dia tena tsara amin'ny olona fantatrao noho manao izany irery… marina ve isika, sa marina ny anay?
Manomboha Train Journey Journal & Maka sary
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ampiasana ny fotoana eo amin'ny fiaran-dalamby dia ny hanomboka diary fandraketana ny traikefa. Izahay lalana rehetra nahafono koa eo amin 'ny fianarana, birao fiainana, andavanandro olana fa matetika manadino ny dingana hiala amin'izany toe-tsaina olana sy miaina ny faharoa. Ny fanoratana diary no hanome anareo fomba fijery sasany amin'ny zavatra, indrindra fa rehefa miverina izany afaka kelikely. Plus, dia ho fahatsiarovana tsara ny dia, ary ny fampahatsiahivana ny zavatra tianao mahatsapa / mieritreritra / traikefa indray.
Ankafizo ny fiaran-dalamby nankany, omeo alalana haka aina ny tenanao, ary raiso ny zava-drehetra momba ny dia ataonao! Ny toerana azo itokisana indrindra hanafarana ny tapakilan'ny lamasininao dia saveatrain.com azo antoka, toy izany – mahazo movin '!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
soso-kevitra Train Travel traveltips